သင်၏ Mac သည်ပြင်ပ hard drive တစ်ခုကိုမသိရှိပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း ငါက Mac ကပါ
သင်၏ Mac သည်ပြင်ပ hard drive ကိုမသိပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း
Ruben gallardo | | လဲ tutorial
ပြင်ပသိုလှောင်မှု drive တစ်ခုအားသင်၏ Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းကိုသူအသိအမှတ်မပြုပါသလော။ ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားပေးသောအဖြေအချို့နှင့်ပြtheနာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ယခုတွင်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ယောက်မျှအလုပ်မလုပ်နိုင်။ သင်၏ကွန်ပျူတာ၏ချဲ့ထွင်သည့် ports နှင့်သိုမဟုတ်သိုလှောင်မှု medium သည်ချွတ်ယွင်းနေကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အများအပြားဖြေရှင်းချက်ပေးရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည် ၎င်းတို့အနက်အချို့သည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်၊ သို့သော်အထင်ရှားဆုံးသောအချိန်အခါများမှာကျွန်ုပ်တို့လွှင့်ပစ်သောအရာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် hard drive သို့မဟုတ် USB မှတ်ဉာဏ်ကိုသင်၏ Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဘာမျှမဖြစ်လျှင်အောက်ပါအတိုင်းဖြေရှင်းနည်းများရှိနိုင်သည်။
1 USB ကြိုးကေတာ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
2 Finder ထဲ၌ပြင်ပ disk များပြသခြင်းမရှိပါ
3 System Management Control (SMC) ကိုပြန်စပါ။
3.1 ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဘက်ထရီမရှိဘဲ MacBook လက်တော့ပ်များ (MacBook Air, MacBook, MacBook Pro):
3.2 iMac, Mac Mini, Mac Pro ကဲ့သို့သောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများ:
3.3 iMac Pro (သမားရိုးကျ iMac သို့အဆင့်အမျိုးမျိုး)
သင်စစ်ဆေးသင့်သောပထမအဆင့်တစ်ခုမှာ၊ မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒြပ်စင်သည်အဆင့်များ၌မှားယွင်းမှုရှိ၊ မရှိဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိုက်မဲပုံရသည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့် - အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းများကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါ - အချက်အလက်များကိုဖတ်ရန်နှင့်ဖတ်ရန်ကြိုးစားသည့်ကေဘယ်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ သောကြောင့်, ဒီ hard drive ကိုအခြားကွန်ပျူတာတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။ USB ကြိုးကပျက်ကွက်တဲ့ဒြပ်စင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည် USB မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်ပါကဤအဆင့်ကိုကျော်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
Finder ထဲ၌ပြင်ပ disk များပြသခြင်းမရှိပါ
ပြင်ပ hard drive (သို့) USB မှတ်ဉာဏ်ကိုသင်ဆက်သွယ်ပြီးညွှန်ပြသည့် LEDs အလုပ်လုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပါဝါရရှိမည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ နောက်တစ်ဆင့်ကိုဆက်မလုပ်မီ၊ Mac သည်စက်ကိုအမှန်ပင်မှတ်မိကြောင်းအတည်ပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဒီအတွက်“ Finder” ကိုသွားပြီး menu bar ကိုသွားပြီး“ Go” option ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ ပြီးရင် folder ကိုသွားပါ ပေါ်လာတဲ့ dialog box ထဲမှာအောက်ပါကိုရေးပါ:
/ Volumes များ /
ရလဒ်များကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ပြင်ပ hard drive (သို့) USB မှတ်ဉာဏ်သည်မြင်ကွင်းပေါ်တွင်ပေါ်နေသည်, သင်သည်ထိုသူတို့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသူတို့မမြင်ရသည့်အကြောင်းပြချက်ကျနော်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်ပြောပြသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သင်၏ Mac တွင်ပြင်ပသိုလှောင်မှု element များမှမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်မြင်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသင်၏စနစ်တွင်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုမရှိချေ။ ဒီကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ကောင်းပြီဘာလဲ Finder ဦး စားပေးနှင့် voila အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ activation.
ဆိုလိုသည်မှာ Dock ရှိ“ Finder” ကိုနှိပ်ပါ။ ယခု menu bar သို့သွားပြီး“ Finder” ကိုထပ်နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက်“ Preferences” ကိုနှိပ်ပါ။ မတူကွဲပြားတဲ့ tabs တွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာသင်နောက်ဆုံးရလဒ်အနေနဲ့သင်လိုချင်တာပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ Desktop ပေါ်တွင်ပြသရန်သင်၏ပြင်ပသိုလှောင်ရေးကိရိယာကိုဆက်သွယ်လိုပါက၊ « General »ကိုသွားပြီးသင်လိုချင်သော element များကိုရွေးချယ်ပါ.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်လိုချင်သည်မှာ Finder ဘေးဘားတွင်ပေါ်လာပါကရွေးပါ "Sidebar" option ကိုသင် "Devices" အပိုင်းတွင်ပြသချင်သော options ကိုစစ်ဆေးပါ.
System Management Control (SMC) ကိုပြန်စပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အထက်ပါဖြေရှင်းနည်းများကသင့်ကိုမကူညီနိုင်ပါကအချိန်ရောက်လိမ့်မည် system ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု controller ကို resetလည်း SMC အဖြစ်လူသိများ။ ဒီအဆင့်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mac ကိုထပ်ပြီးအလုပ်လုပ်စေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ Apple support စာမျက်နှာတွင်သင့်တွင်ရှိသည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သင်၏ခြေလှမ်းများအားလုံးရှိသော်လည်း Soy de Mas မှ၎င်းတို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဘက်ထရီမရှိဘဲ MacBook လက်တော့ပ်များ (MacBook Air, MacBook, MacBook Pro):
Apple menu> Shut Down ကိုရွေးပါ
သင်၏ Mac ပိတ်ပြီးပါကကီးဘုတ်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ Shift-Control-Option ခလုတ်များကို နှိပ်၍ တစ်ချိန်တည်းတွင်ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဤခလုတ်များနှင့်ပါဝါခလုတ်ကို 10 စက္ကန့်ဖိထားပါ
iMac, Mac Mini, Mac Pro ကဲ့သို့သောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများ:
သင်၏ Mac ပိတ်ပြီးပါကကြိုးကြိုးကိုဖြုတ်ပါ
ငါးစက္ကန့်စောင့်ပြီးနောက် Mac ကိုဖွင့်ရန်ပါဝါခလုတ်ကိုထပ်နှိပ်ပါ
iMac Pro (သမားရိုးကျ iMac သို့အဆင့်အမျိုးမျိုး)
iMac Pro ပိတ်ပြီးပါက power ခလုတ်ကိုရှစ်စက္ကန့်ဖိထားပါ
Mac Pro ကိုဖွင့်ရန်ပါဝါခလုတ်ကိုထပ်နှိပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင်၏ Mac သည်ပြင်ပ hard drive ကိုမသိပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် MACDRIVE7Pro ဖြင့် windows9မှ hard disk ကို format လုပ်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းကို Imac G5 (OS X Tiger အဟောင်း) တွင်ထည့်ပြီး installation disk ကို run သောအခါ၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော်ခဏကြာသော်၎င်းသည် တစ် ဦး ကူးမျဉ်းကြောင်းနှင့်အတူမျက်နှာပြင်၏အလယ်၌စက်ဝိုင်း။ hard drive ကို format မကောင်းဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ်ဘာပျောက်နေသလဲ။
နောဧ ဘရေတန် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဒီ Mac Pro (သို့) ပန်းသီးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအသစ်ဖြစ်နေသောကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းနှင့်ငါ့မေးခွန်းက; ငါ့မှာ Mac pro 2015 ရှိတယ်၊ dj အတွက်သုံးချင်တယ်။ ငါမှာ external usb disk ရှိတယ်၊ ငါအဲဒါကိုချိတ်ဆက်ပြီးဖွင့်လိုက်ရင်ငါသီချင်းတွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေမရတော့ဘူး။ ဘာမှမဖြစ်လာဘူး။ အသံထဲကဗွီဒီယိုမရှိဘူး၊ မင်းငါ့ကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
noe breton အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အသုံး ၀ င်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အလုပ်မလုပ်သော USB နှင့်ပြhadနာ ရှိ၍ ဤဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးသည်အထိကျွန်ုပ်သည် USB ဖြစ်သည်ဟုထင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အခါအားလျော်စွာထွက်ပေါ်လာသောစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသောအရာများကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ စက်ရုံ အမည်ရှိ
ကားလို့စ် ရီဂျယ် ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို၊ ငါ မင်းကို တိုင်ပင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Mac တွင် စနစ်ပြဿနာရှိခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တွင် မူရင်းဒစ်ကို အခြားအခဲဒစ်ဖြင့် အစားထိုးခဲ့ပါသည်။ ပြဿနာက ကျွန်ုပ်သည် ဒစ်ခ်ဟောင်းကို ဝင်ရောက်၍ မရသောကြောင့်၊ ၎င်းတွင် အချက်အလက်များလည်း မရှိပါ။ သူ မတပ်ဘူး ၊ စာရင်းမသွင်းဘူး … ငါ ဘာလုပ်ရမလဲ ။
Carlos Rigel ကို အကြောင်းပြန်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြဿနာမှာ ကျွန်ုပ်၏ mac book pro တွင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော WD ဒြပ်စင်များသယ်ဆောင်နိုင်သော hard drive တစ်ခုရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မပေါ်ဘဲအချိန်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရပ်တန့်သွားသည်၊ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုရှိပြီး LED မီးသည်အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်၊ mac အဟောင်းသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း mac OS high sierra တွင် လုံးဝအလုပ်မလုပ်ပါ၊ အထက်ပါအဆင့်အားလုံးကို စမ်းပြီးဖြစ်သည်။ :/
သင်၏အီးမေးလ်လက်မှတ်များကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအီးမေးလ် Signature Unlimited ဖြင့် HTML လက်မှတ်များဖန်တီးပါ
Apple သည်အိုင်ယာလန်၏ဒဏ်ငွေအတွက်ပထမဆုံးယူရိုသန်း ၁၅၀၀ ကိုအပ်နှံသည်